Ataonao ho valala tsy ampoka ny ahitra ve aho, ka hihinana ny ahi- -tsorohitra ? [Cousins 1871 #300, Veyrières 1913]
Proverb 66 Ahoana no malaky mirom- -boanjo ? Aza ataonao tahaky ny voanjo aho, ka ny nahitana no akofokofoka . [Veyrières 1913 #1357]
Proverb 263 Alozy ny teny : aza manao lapa marivo . [Veyrières 1913 #276]
Aza atao lapa marivo fa alozy ny teny . [Rinara 1974 #407]
Proverb 374 Ana-baly , tsy atao anake . [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb 384 Anantsinahy va aho ka atao ambony vary ? [Houlder 1895 #2189]
Proverb 402 Andevolahy avy nandranto : izay atao rehetra "izaho avy nandranto " . [Veyrières 1913 #502]
Proverb 438 Andevolahy ondanam-hady : atao avaratra , mianatsimo loha ; atao atsimo, tototry ny kitay. [Cousins 1871 #195]
Proverb 458 Andraso ho folaka ny andro vao atao ny fandevenana . [Veyrières 1913 #2841]
Proverb 562 Anoano be izany, ataovy izay ataonao ! [Veyrières 1913]
Proverb 609 Antsiben-daRainisamboady : tefitry ny an-olona ; mandehandeha misedisedy , ny any ny tena tsy atao . [Cousins 1871 #259]
Antsiben-dRainisamboady , ka langan' ny an' olona . [Veyrières 1913 #33]
Antsiben-dRainisamboady : langan' ny an' olona , mandeha misedisedy , fa ny an-tena tsy atao . [Rinara 1974 #304]
Proverb 626 Aoka atao resaka , fa raha atao ady , mandany fananana. [Veyrières 1913 #3328]
Proverb 628 Aoka hanao vero an-tahala : ny lava tsy hanosihosy ny fohy, ny fohy tsy hamingana ny lava. [Veyrières 1913 #5163, Cousins 1871 #276]
Aoka hatao vero am-bala : ny lava tsy hanosihosy ny fohy ary ny fohy tsy hamingana ny lava . [Rinara 1974 #325]
Proverb 631 Aoka hatao lomano tsy mikobaka . [Houlder 1895 #1222, Veyrières 1913 #1052, Cousins 1871 #275]
Aoka hatao lomano tsy mikobana . [Rinara 1974 #323]
Proverb 636 Aoka ny angana, fa ny nato atao . [Veyrières 1913 #4366]
Proverb 644 Aombilahy nihaotra an-tanimena , mavon’ ny nataony . [Samson 1965 #A101]
Proverb 685 Atao be ny raharaha , ka ny volivary indray no tsy vita . [Nicol 1935 #326]
Nahoana no atao be ny raharaha , ka ny voli-vary indray no tsy efa ? [Cousins 1871]
Nahoana no atao be ny raharaha , ka ny voli-vary indray no tsy vita ? [Cousins 1871]
Nahoana no atao hoe: "Be ny raharaha " , ka ny voly vary indray no tsy efa? [Houlder 1895 #717]
Proverb 686 Atao ho inona ny sola ka isatrohana ! [Houlder 1895 #2041, Veyrières 1913 #2128, Cousins 1871 #293]
Proverb 688 Ataoko ambany ny sangany. [Veyrières 1913 #6446]
Proverb 689 Ataoko fanjakana arindra . [Veyrières 1913 #189]
Proverb 690 Ataoko maty tanako amin' ny rambon-tsalakany . [Veyrières 1913 #411]
Proverb 692 Atao mikalo. [Veyrières 1913 #5430]
Proverb 693 Atao mpisorona afo , dia tsy mandà ; atao mpaka kitay , dia tsy mandà ; atao mpitoto vary , dia mitoto ; ary hovonoina , dia maty rahateo ; hovelomina , dia izy mpanjaka no mifidy . [Veyrières 1913]
Proverb 694 Ataonay fihinan-daingon’ adala, ka tombo-tokana ihany. [Veyrières 1913 #2061, Cousins 1871]
Proverb 695 Ataonao ho haren' ny maty momba angaha no tabatabainao ? [Veyrières 1913 #3192]
Proverb 696 Ataonao ho katsaka va aho ka hiteraka an-tehezana . [Veyrières 1913 #1264, Cousins 1871 #295]
Ataonao ho katsaka ve aho ka hiteraka an-tehezana ? [Houlder 1895 #1663]
Proverb 697 Ataonao ho katsaka va aho, ka ikatsahanao ? [Veyrières 1913 #2991]
Proverb 699 Ataonao ho manana inona aho no angatahanao lasiray fahavaratra ? [Veyrières 1913 #2487]
Proverb 700 Ataonao ho omby tsy enin-drano ve aho, ka hisotro ranon-tambiazona ? [Cousins 1871 #298]
Proverb 701 Ataonao ho soavaly vahiny angaha aho no tsy hahalala an' i Mahamasina ? [Houlder 1895]
Tsy soavaly vao aho ka tsy hahalala an' i Mahamasina . [Rajemisa 1985]
Proverb 703 Ataonao tahaky ny amponga izahay : ny iray tehatehafina ary ny iray havokavohana . [Veyrières 1913 #5495]
Proverb 704 Ataony an-kila bao. [Veyrières 1913 #3655]
Proverb 706 Atao ravinkazo nanintsana. [Rajemisa 1985]
Proverb 723 Ataovy mitombo hoatry ny tohatr' omby fahavaratra , fa aza atao mihena hoatry ny trafon' omby ririnina . [Veyrières 1913 #2171]
Ataovy mitombo ohatra ny tohatr’ omby fahavaratra, fa aza atao mihena ohatra ny trafon’ omby ririnina . [Cousins 1871]
Proverb 726 Ataovy tery omby ririnina ka atao izay tsy hahabotry ny zanany ary tsy hankahia ny reniny. [Rajemisa 1985]
Toy ny tery omby ririnina : atao tsy mankahia ny reniny, tsy mahabotry ny zanany. [Houlder 1895 #1273, Veyrières 1913 #6194, Cousins 1871]
Proverb 733 Ataovy toy ny tsipoy mifamelona . [Houlder 1895 #1778, Cousins 1871 #316]
Ataovy toy tsipoy mifamelona . [Veyrières 1913 #76]
Ataovy tsipoy mifamelona , fa aza atao vay ratsy mifampihinana . [Rinara 1974 #340]
Proverb 787 Aza anganonganoina ny fandroaka omby : omby telo ka atao telo dia. [Rinara 1974 #370]
Proverb 797 Aza atao alon-daokan' ny Betsimisaraka , ka ny mialo no voky aloha. [Rinara 1974 #31]
Manao aloben' ny Betsimisaraka , ka izy mialo no voky aloha. [Veyrières 1913 #4515]
Proverb 798 Aza atao am-bozokely tsy mahaleo tady . [Rinara 1974 #374]
Aza atao am-bozon-kely tsy mahaleo tady , aza atao miesora ny vody kely hipetrahan' ny vody be, aza atao ny kely tsy mba mamindro . [Veyrières 1913 #705]
Proverb 800 Aza atao any ray mila. [Veyrières 1913 #2345, Rinara 1974 #376, Cousins 1871 #338]
Proverb 801 Aza atao an-kambo ny hitsak' ondry , fa maharary . [Houlder 1895 #1350, Veyrières 1913 #2688]
Proverb 805 Aza atao fandraka antoanim-pively aho. [Houlder 1895 #439, Rinara 1974]
Aza atao fandraka atoham-pively . [Veyrières 1913 #3453]
Aza atao fandraka tohanam-pively . [Veyrières 1913 #3453]
Proverb 807 Aza atao fia-zana-borona , na kely tsy mba mamindro . [Cousins 1871 #341]
Proverb 808 Aza atao fihavanam-a -bato : raha tapaka , tsy azo atohy ; fa ataovy fihavanan-dandy : raha madilana aza, tohizana . [Cousins 1871 #342]
Proverb 810 Aza atao fitia fary ka raha lany ny mamy , dia nariana . [Rinara 1974 #385]
Proverb 811 Aza atao fitia mangahazo : tiana ihany ka akapokapoka . [Veyrières 1913 #5069, Rinara 1974 #386, Cousins 1871]
Proverb 812 Aza atao fitia miharo avona . [Veyrières 1913 #5070, Cousins 1871]
Aza atao fitia sisihana avona . [Rinara 1974 #391]
Aza manao fitia mifono avona . [Houlder 1895 #208]
Proverb 813 Aza atao fitia paraky : nony lany tsiro narora amim-bovoka . [Rinara 1974]
Proverb 814 Aza atao fitia rano-trambo : be fihavy ka mora ritra ; fa ataovy tahaka ny rano am--pasika : tsy nampoizina hisy ka nahazoana . [Nicol 1935]
Proverb 815 Aza atao fitia savony : tiana ihany fa navalana rano . [Rinara 1974 #390]
Aza atao fitia savony : tiana ihany ka avalan-drano . [Veyrières 1913 #5326]
Aza atao fitia savony: tiana ihany, ka avalan-drano ; fa ataovy fitia foza kely, ka lany mbamy ny tongony. [Cousins 1871]
Proverb 816 Aza atao fitia varavarana , tiana ihany fa atositosika . [Houlder 1895 #217]
Aza atao fitia varavarana : tiana ihany fa natositosika . [Rinara 1974 #388]
Aza atao fitia varavarana : tiana ihany, ka atosilosika . [Nicol 1935 #8]
Aza atao fitia varavarana : tiana ihany ka atositosika . [Veyrières 1913 #5071, Cousins 1871]
Fitia varavarana : tiana ihany fa atositosika . [Rinara 1974 #1183]
Proverb 817 Aza atao fitia voangivy : mbola lavitra ihany ka kivy . [Veyrières 1913 #5072, Houlder 1895]
Proverb 818 Aza atao fitia vonindraozy : izy tiana indray no manindrona. [Rinara 1974 #389]
Proverb 819 Aza atao fitsara-mitanila . [Cousins 1871 #347]
Aza atao fitsara-mitanila , fa samy zanaka . [Rinara 1974 #392]
Aza manao fitsara-mitanila . [Veyrières 1913 #3329]
Proverb 821 Aza atao fola-tana-manondro . [Cousins 1871 #348, Nicol 1935 #304]
Aza atao fola-tana-manondro , na fotsy rora miteny . [Rinara 1974]
Proverb 822 Aza atao fotsy volo manara-dalana , na miteny fa tsy henoina . [Rinara 1974]
Aza atao fotsy volo mitozo-poana . [Veyrières 1913 #1805]
Aza atao fotsy volo mitozo-poana , na miteny fa tsy henoina . [Rinara 1974]
Proverb 823 Aza atao fotsy volo mitozo foana, na zokiny manara-dia . [Houlder 1895]
Proverb 824 Aza atao hala maina , hoatry ny vorondolo : tsy hohanin-kena , tsy hosotroin-dro , fa vonoim-poana . [Veyrières 1913 #5645]
Aza atao hala maina ohatra ny vorondolo : tsy ho hanin-kena , tsy hosotroin-dro , fa vonoim-poana . [Houlder 1895]
Aza atao hala maina toa vorondolo : tsy ho hanina , tsy halain-dro fa vonoim-poana . [Rinara 1974]
Proverb 825 Aza atao hazo lazoin’ ny varatra: malazo mbamin-draviny , maina mbamy ny vatany, ary fohatra mbamy ny fakany . [Cousins 1871 #349]
Aza atao hazo lazoin' ny varatra : malazo mbamin-draviny , maina mbamin' ny vatany, ary fohatra mbamin' ny fakany . [Veyrières 1913 #2586]
Aza atao hazo lazoin' ny varatra : malazo mbamin' ny raviny, maina mbamin' ny vatany, ary fohatra mbamin' ny fakany . [Rinara 1974 #400]
Proverb 826 Aza atao hoatry ny kifafa : mipepipepy marain-tsy hariva , ka tsy hita izay rariny hiainana . [Veyrières 1913 #753]
Aza atao ohatra ny kifafa : mipepipepy marain-tay hariva, ka tsy mahita izay rariny hiainana . [Cousins 1871]
Aza atao toy ny kifafa : mipepipepy marain-tsy hariva , nefa tsy mahita izay rariny iainana ihany. [Rinara 1974]
Proverb 827 Aza atao hoditra ifandroritana . [Rinara 1974 #401, Cousins 1871 #352]
Proverb 828 Aza atao hoe : may ity trano atsimo ka asa azy, fa voin-kava mahatratra. [Veyrières 1913 #1055, Rinara 1974 #402, Cousins 1871 #354]
Proverb 829 Aza atao hoe : " zakan' andriana " . [Veyrières 1913 #192]
Aza dia atao hoe "zakan' andriana " . [Houlder 1895]
Aza dia atao hoe : zakan' Andriana (tenin' Andriana ). [Rinara 1974 #433]
Proverb 830 Aza atao kely tsy mba mamindro . [Rinara 1974 #403]
Aza manao kely tsy mba mamindro . [Veyrières 1913 #624, Rinara 1974 #532]
Proverb 831 Aza atao lambamena nome-maty . [Veyrières 1913 #754, Rinara 1974 #404, Cousins 1871 #355]
Aza atao lambamena nomena ny maty . [Houlder 1895 #2132]
Proverb 832 Aza atao lamban’ angidina : tsy hifonosa-maty , tsy hotafim-belona . [Veyrières 1913 #2277, Cousins 1871 #356]
Aza atao lamban' angidina : tsy itafiam-belona , tsy ifonosan-draha maty . [Rinara 1974]
Lamban' angidina : itafiam-belona , tsy mahatafy , ifonosan-draha maty , tsy mahafono . [Rinara 1974 #1703]
Lamban' angidina : ka itafiam-belona , tsy mahatafy ; ifonosa-maty , tsy mahafono . [Houlder 1895]
Lamban' angidina : sady tsy tafiam-belona no tsy ifonosan-draha maty . [Rinara 1974 #1706]
Tsy tafim-belona , na ifonosan-draha maty , toa lamban' angidina . [Rinara 1974 #4798]
Proverb 834 Aza atao manara-bato aman-kazo . [Rinara 1974 #408]
Aza atao manara-bato aman-kazo , fa mba ataovy manaraka olombelona . [Veyrières 1913 #77]
Proverb 835 Aza atao mandeha ila toa tenon-drafy . [Houlder 1895 #1820]
Aza atao mandeha ila toa tenon-dratsy . [Rinara 1974 #409, Cousins 1871 #358]
Proverb 836 Aza atao mangidy tsy andramana . [Rinara 1974 #410]
Proverb 837 Aza atao maty mahitsy, toy ny hazo. [Houlder 1895 #1092, Cousins 1871 #360]
Aza atao maty mana-mahitsy toa hazo . [Rinara 1974 #411]
Maty mahitsy toy ny hazo . [Veyrières 1913 #720]
Proverb 840 Aza atao mizana tsindriana ila . [Veyrières 1913 #5496]
Aza atao mizana tsindrian’ila . [Nicol 1935 #113, Rinara 1974]
Proverb 842 Aza ataonao fitia haron-kely : asiana roa, dia feno, afahana iray, dia tapany. [Cousins 1871 #374]
Proverb 843 Aza atao omby tokana manaraka ny arivo . [Rinara 1974 #33]
Aza manao omby tokana manaraka ny arivo . [Houlder 1895 #273, Veyrières 1913 #5979]
Proverb 844 Aza atao resy momba mahery . [Rinara 1974 #34]
Aza atao resy momba ny mahery . [Houlder 1895 #351, Veyrières 1913 #619]
Proverb 845 Aza atao sinibe tantanin' ny kely, ka lehibe tsy mahazaka manana . [Veyrières 1913 #620, Rinara 1974]
Proverb 846 Aza atao sola manara-dia . [Veyrières 1913 #2129]
Proverb 847 Aza atao tanantanana ivelan’ ny fahitra lahy. [Cousins 1871 #365]
Aza manao zaza mena volo na tanantanana ivelan' ny fahitra . [Rinara 1974]
Aza manao zaza mena volo , tanantanana ivelan' ny fahitra . [Veyrières 1913 #961, Cousins 1871 #555]
Proverb 849 Aza atao tery vay manta . [Houlder 1895 #1255]
Proverb 850 Aza atao toy ny angady , ka ny lelany mitomboka tany , sasana amin' ny rano , fa ny zarany tsy mikasi-potaka , hosorana menaka . [Rinara 1974 #418]
Proverb 852 Aza atao toy ny vato tsindry ahazana , ka raha maloka ny andro atsipiny . [Houlder 1895 #589]
Proverb 853 Aza atao tompony mangataka atiny. [Veyrières 1913 #278, Cousins 1871 #367]
Proverb 854 Aza atao tsy mahazaka manana toa zanak' omby . [Veyrières 1913 #2174, Rinara 1974 #421, Cousins 1871 #369]
Proverb 855 Aza atao tsy mahita hiainana : raha misioka , atao hoe misiotsio-poana , nony tsy misioka indray, lazaina ho manary sioka . [Rinara 1974 #422]
Aza tsy hita hiainana : raha misioka , atao hoe : Misiotsio-poana ; raha tsy misioka , atao hoe : Manary sioka . [Veyrières 1913 #759, Cousins 1871 #353]
Misioka , ataony hoe : " misiotsio-poana " ; tsy misioka ataony hoe : " manary sioka " . [Veyrières 1913 #5815, Cousins 1871 #1835]
Misioka ataony hoe : misiotsio-poana , tsy misioka indray ataony hoe manary sioka . [Rinara 1974 #2411]
Proverb 856 Aza atao vaky loha manompo ohatry ny fantaka . [Rinara 1974 #423]
Proverb 857 Aza atao very manan-trano , toa foza. [Veyrières 1913 #412, Rinara 1974 #425, Cousins 1871 #371]
Proverb 858 Aza atao verin' ny adin-dreniomby ny adin' ombalahy . [Rinara 1974]
Proverb 859 Aza atao very sioka ny raharaha . [Veyrières 1913 #3239, Rinara 1974 #426, Cousins 1871 #372]
Proverb 860 Aza atao vonon-drenikely , aza dia angatrangarina ny zaza . [Veyrières 1913 #901]
Proverb 867 Aza dia atao fatra-pandefitra toy ny mpivaro- tantely : ny tompony indray no milela-tanana . [Cousins 1871 #376]
Aza dia fatra-pandefitra toy ny mpivaro- tantely , ka ny tompony indray no milela-tanana . [Houlder 1895 #654]
Aza dia fatra-pandefitra , toy ny mpivaro- tantely : ny tompony indray no milela-tanana . [Rinara 1974]
Proverb 889 Aza homehy lavo , fa ny tody tsy misy, fa ny atao no miverina . [Houlder 1895 #1718, Veyrières 1913 #2690, Cousins 1871 #387]
Aza homehy lavo : ny tody tsy misy, fa ny atao no miverina . [Nicol 1935 #10]
Proverb 1044 Aza manao hoe : Itompokolahy Ikaky , fa Rabevoina rain' ialahy. [Rinara 1974 #506]
Raha fatin-drain' olona ataony hoe : Rabevoina rain' ialahy, fa raha fatin--drainy kosa dia lazainy hoe Ratompokolahy Ikaky . [Rinara 1974 #3564]
Raha fatin-drain’ olona ataony hoe: "Rabevoiny rain’ ialahy!" ary raha fatin-drainy kosa ataony hoe: "Ratompokolahy Ikaky !". [Cousins 1871 #2647]
Raha ny ahy, ataonao hoe, rabevoiny rain' ialahy; ary raha ny anao, dia ataonao hoe ratompokolahy ikaky . [Abinal 1888]
Proverb 1116 Aza manao razam-be nahitana atao ratsy fonosana . [Houlder 1895 #2133, Veyrières 1913 #2849]
Aza manao razam-be nahitana , ka atao ratsy fonosana . [Rinara 1974 #561]
Proverb 1211 Aza manao voli-vary an-kitram-bero : ny tian' ny tany tsy atao , fa ny tian' ny olona no atao . [Veyrières 1913 #2280, Cousins 1871, Rinara 1974]
Proverb 1268 Aza mandrora olon-tsy maimbo, ka hatao mangidy be fofona , ohatra ny tongolo tapa- -bilany . [Houlder 1895]
Proverb 1335 Aza mety atao fantaka fanolehan-tsarika . [Houlder 1895 #1692]
Aza mety hataony fantaka fanolahan-tsarika . [Veyrières 1913 #6107, Cousins 1871]
Aza mety hataony fantaka fanolehan-tsarika . [Rinara 1974 #717]
Proverb 1367 Aza mifofo vorona an--danitra . [Veyrières 1913 #1757, Rinara 1974 #742, Cousins 1871 #611]
Aza mitomany vorona an--danitra hatao am-parapaingo . [Rinara 1974 #803]
Aza tomany vorona an--danitra . [Cousins 1871 #716, Nicol 1935 #44]
Mitomany vorona an--danitra . [Veyrières 1913 #2094, Rajemisa 1985]
Proverb 1401 Aza mila voatsiary ka tandroky ny moka no tadiavin-ko sotro fotsy . [Rinara 1974 #778]
Aza mila voa tsy ary : tandroky ny moka , ka "ataoko sotro fotsy". [Veyrières 1913 #2072, Cousins 1871 #627]
Proverb 1425 Aza misomidika ambony toa menaka : fa ataovy latsaka anatiny toa tsoka. [Houlder 1895 #531]
Aza somidika ambony, toa menaka ; fa ataovy latsaka anatiny, toa tsoka. [Cousins 1871 #709, Nicol 1935 #315]
Aza somidika ambony toa menaka , fa ataovy latsaka anaty toa tsoka. [Veyrières 1913 #4740]
Proverb 1500 Aza ny firavana no atao fihaviana . [Houlder 1895 #1276, Cousins 1871 #690]
Proverb 1504 Aza ny hodi- -boanjo fanary no atao sakafo mahavita . [Houlder 1895 #603]
Tsy mety raha ny hodi- -boanjo fanary no tonga sakafo mahavita . [Veyrières 1913 #4633, Rinara 1974 #4659, Cousins 1871 #3474]
Proverb 1589 Banga nihinam-boatavo : ny akanjo nify no may, ka ny lela no atao solon-drivotra . [Rinara 1974 #844, Cousins 1871 #731]
Proverb 1594 Bangon’ ny atao Baondriana , ka tsy mitondra kitay mody . [Cousins 1871 #736]
Proverb 1620 Be faniriana kely fila , vary aloha tsy vatran' ny kamo . [Rinara 1974 #890]
Be faniry , kely fila; ny vary aloha tsy ataon' ny kamo. [Houlder 1895 #663, Cousins 1871]
Proverb 1785 Dia saotra no atao anareo, mba tsy ho vaky lovia fararano , tsy ho banga nify voka-katsaka , tsy ho tapa-tsalaka vory vahoaka . [Veyrières 1913 #4124, Cousins 1871 #833]
Dia saotra no atao anareo mba tsy ho vaky vilia fararano , tsy ho banga nify voka-katsaka , tsy ho tapa-tsalaka vory vahoaka . [Rinara 1974]
Proverb 1804 Didy sompirana ka sarotra atao efa-joro. [Rinara 1974 #995, Cousins 1871 #837]
Proverb 1865 Efa raharaha hatao ihany, hoy ilay vinanto naka fanafody , dia nitondra fotaka . [Rinara 1974 #1025]
Proverb 1945 Fanafody apetraka amin' ny drindran' Ingilo , atao hampanaritra vao manitatra . [Veyrières 1913 #3246]
Proverb 1948 Fanafodin’ ny osa, ny marina atao . [Rinara 1974 #1071, Cousins 1871 #897]
Fanafodin' ny osa ny marina ataony . [Houlder 1895 #92]
Fanafodin' ny osa : ny marina no atao . [Veyrières 1913 #2945]
Proverb 1964 Fanambadiana nataon' ny vaventy : sady tiako no eran-dry rainy. [Veyrières 1913 #189, Cousins 1871]
Proverb 2062 Fatra-piahiahy , mamosavy ; fatra-pifehy trano , fangalarina . [Rinara 1974 #1135, Cousins 1871 #944]
Fatra-piahy mamosavy ; fatra-pifehy trano fangalarina . [Houlder 1895 #40]
Fatra-pifehy trano . [Rajemisa 1985]
Fatra-pifehy trano , fangalarina ; ary fatra-piahiahy olona , mamosavy . [Veyrières 1913 #4287]
Izay fatra-piahiahy mpamosavy . [Veyrières 1913 #148, Rajemisa 1985]
Ny fatra-pifehy trano indray no atao ho mamosavy . [Veyrières 1913 #168]
Proverb 2069 Fatra-pitia rafozana , ka ny lela no atao jono . [Veyrières 1913 #1444]
Proverb 2105 Firain' ny vava fito saha; firain' ny harem-boantondro . [Houlder 1895 #802]
Proverb 2173 Fotoana efa : varangaran-tsy atao ; olona famotoana tsy fanantso ambo. [Samson 1965 #F44]
Proverb 2227 Hady voanjo ny fanompoana , ka tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona , fa ny mipetraka amin' ny tany koa hohazan-tanana , hamenoana ny harona . [Veyrières 1913 #373]
Tahaka ny hadi- voanjo ny fanompoana: ka tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona , fa ny mipetraka amin' ny tany hohazan-tanana koa mba hamenoana ny harona. [Houlder 1895 #1527]
Proverb 2286 Hanin-karena Itsiandrainazy : dobo telo ka atao indray manosika ihany. [Veyrières 1913 #3798]
Hanin-karenan' Itsitiandrainazy : dobo telo ka atao indray manosika . [Rinara 1974 #1273]
Hanin-karen' Itsiandrainazy : dobo telo ka atao indray manosika ihany. [Houlder 1895 #766]
Proverb 2368 Hevitra , ka raha mety dia atao , fa raha tsy mety dia avela ; nefa aza ny tenako no ariana , fa ny teniko no ario . [Veyrières 1913 #6498]
Proverb 2381 Hianao no angady nananana , vy nahitana , ka sarotra atao rainazy . [Rinara 1974]
Proverb 2401 Hikoha-maina aza hataony , ka mainka fa misy ny sery hanolahana. [Cousins 1871 #1072]
Koha-maina aza ataony , indrindra fa misy sery kely hanolahany. [Rajemisa 1985]
Proverb 2402 Hilela-maina aza hataony ka mainka fa molotra misy tantely . [Rinara 1974 #1339]
Hilela-maina aza hataony , koa indrindra fa molo-boasira . [Cousins 1871]
Hilela-maina aza hataony , koa indrindra fa molotra misy tantely . [Cousins 1871]
Hilela-maina aza hataony , koa indrindra fa raha molotra misy tantely . [Houlder 1895 #895]
Proverb 2424 Hividy aza hatao, ka mahazo vao mifararemotra . [Cousins 1871 #1080]
Hividy sarotra atao , ka mahazo mora vao mifararemotra . [Rinara 1974 #1353]
Hividy sarotra hatao, ka mahazo mora vao mifendrofendro . [Cousins 1871 #1082]
Proverb 2570 Ingorifotsy mifono sahondra, ka bokan' ny nataony . [Houlder 1895 #74]
Ingorifotsy mitono sahondra: bokan’ ny nataony . [Cousins 1871 #1140]
Ingorifotsy nitono sahondra : bokan' ny nataony . [Rinara 1974 #1439]
Ingorifotsy nitono sahondra , ka bokan' ny nataony . [Veyrières 1913 #2002]
Proverb 2619 Izaho no ataonao Rafotsibe manoham-bato ? [Veyrières 1913 #1873, Cousins 1871 #1162]
Proverb 2637 Izay ataon' ny manjaka mahatrarantitra azy. [Veyrières 1913 #205]
Proverb 2647 Izay handry no atao Rangahy . [Houlder 1895]
Proverb 2648 Izay hendry no atao Ingahy . [Veyrières 1913 #1817, Cousins 1871 #1179]
Proverb 2655 Izay kofona aloha, hatao tsaingaroroka . [Veyrières 1913 #5265]
Proverb 2699 Izay nataonao an-drainao , dia mba hataon-janakao anao koa. [Veyrières 1913 #973]
Proverb 2700 Izay no takatry ny aina hoy ilay nahandro takatra . [Rinara 1974]
Proverb 2724 Iza no mahalala izay bokan' Inamehana ? fa izay matanjaka no atao isan-jato . [Veyrières 1913 #375, Houlder 1895]
Proverb 2751 Jamba mividy hena : miady varotra ny hohanina fa tsy mangataka ny hatao jiro . [Rinara 1974]
Proverb 2769 Jiolahy manan-trano ka sarotra atao olon-dratsy . [Rinara 1974 #1565]
Proverb 2810 Kamboty be sitrapo , ka lany hatramin' ny taninketsa vao miondri-doha . [Rinara 1974]
Kamboty be sitrapo , ka lany mbamin' ny tanin-ketsa ka "Inona indray no hataoko ?". [Houlder 1895]
Kamboty be sitrapo , ka lany mbamin' ny taninketsa , ka inona indray re no hataoko ? [Veyrières 1913 #1023]
Kamboty manan-tiana : lany mbamy ny tanin-ketsa . [Cousins 1871 #1223]
Kamboty manan-tiana : lany mbamin' ny taninketsa . [Rinara 1974]
Proverb 2887 Ketsa vaventy , ka sarotra atao lahirodona . [Houlder 1895 #1377, Veyrières 1913 #21, Rinara 1974]
Proverb 2935 Kofon' ny nataony ohatra ny totozy misangy an-davenona . [Rinara 1974]
Proverb 2988 Lalao amin-jaza : ka ataovy izay tsy hampitomany azy. [Veyrières 1913 #1515, Houlder 1895]
Lalao amin-jaza ka ataovy izay tsy hitomaniany . [Rinara 1974 #1690]
Tahaka ny lalao amin-jaza , ka atao izay tsy itomaniany . [Rinara 1974 #257]
Tahaka ny laolao amin-jaza , ka atao izay tsy hampitomany azy. [Cousins 1871 #2960]
Proverb 2995 Lamba jiafotsy , ka intelo nasampina fa mievotra ihany. [Rinara 1974 #114]
Ny fihavanana aza ataonao toy ny jiafotsy : intelo asampina ka mievotra ihany. [Houlder 1895 #168]
Proverb 3018 Lambolahy mandry anaty akondro , ka main' ny nahiny. [Veyrières 1913 #6285]
Lambolahy mifono raty ka main' ny nataony . [Houlder 1895]
Lambolahy mifono raty : main' ny ataony . [Rinara 1974 #118, Cousins 1871 #1316, Veyrières 1913]
Proverb 3194 Lokanga tsy atao ka hoe lehibe ny voatavo . [Akademia 2005]
Lokanga tsy atao ka lehibe ny voatavo . [Rajemisa 1985]
Proverb 3223 Lozodozo- pahandro , mantoanto fitono : ny atao ihany ka mankarary . [Veyrières 1913 #4509]
Lozodozo- pahandro sy matoato fitono , ka ny atao ihany no mankarary . [Rinara 1974 #1819]
Proverb 3342 Maizina ny andro azo tsilovina , lalina ny hady , azo toharina , rangavina ny rano , azo lakanina . [Rinara 1974]
Proverb 3352 Malahelo , ka nony maraina fivoaka toy ny hangataka , ary raha hariva fivoaka , heverin' ny sasany hisakan-dalana . [Rinara 1974]
Proverb 3504 Manan-jara samy hazo ny ambiaty : nahazo to amin' Andriamanitra , ka nataon' ny olona famantaran-taona noho ny tenin' ny razana . [Veyrières 1913 #3115, Cousins 1871 #1510]
Proverb 3649 Manasa lamba manify : atao mafy , rovitra; atao malemy, tsy afa-tseroka . [Houlder 1895 #993, Cousins 1871]
Manasa lamba manify : kosehina mafy , rovitra , atao malemy tsy afa-tseroka . [Rinara 1974 #2042]
Proverb 3760 Manetsa mahalana : ny ataon’ ny tena ihany no alaina . [Cousins 1871]
Manetsa vary mahalana , ka ny atao ihany no idiran' ny fatiantoka . [Rinara 1974 #2098]
Manetsa vary mahalana , ka ny atao no alaina . [Houlder 1895 #729]
Proverb 3864 Marina atao am-botraika ka very an-tsasany . [Rinara 1974 #2136]
Proverb 3931 Matesa amam-basy tokana izay mivadika ny teny nataony . [Veyrières 1913 #4200]
Proverb 4033 Miakanakana , hoy Rainifandrotrarana , ka ny zanak' anabaviny no ataony sapaoritra . [Rinara 1974 #2240]
"Miakanakana " , hoy Rainifandrotrarana , ka ny zanak' anabaviny no atao sapaoritra . [Houlder 1895]
Miakanakana , hoy Rainifandrotrarana , ka ny zanak' anabavy no atao sapaoritra . [Veyrières 1913]
Minakanaka , hoy Rainifandrotrarana , ka ny zanak' anabavy no atao sapaoritra . [Veyrières 1913]
Minakanakana , hoy Rainifandrotrarana , ka ny zanak’ anabavy no atao saporitra . [Cousins 1871 #1795]
Proverb 4056 Miangatra , hoy Itsarafihavy : vao teraka dia andevolahy , ka atao Itsarafihavy . [Veyrières 1913 #571, Cousins 1871 #1719]
Proverb 4114 Midodododo amin-doza , ohatra ny omby hatao afana. [Cousins 1871]
Midodododo amin-doza tahaka ny omby hatao afana . [Rinara 1974 #2289]
Proverb 4124 Mieritreritra atao indray miserana, ka nony manenina mandavan' ny taona ! [Rinara 1974 #2294]
Proverb 4428 Mitondra adidy , ohatra ny fangala-bola . [Cousins 1871]
Mitondra adidy amin' ny tsy atao , ohatra ny fangala-bola . [Rinara 1974]
Proverb 4439 Mitono manao mantamanta ; mahandro manao lozodozotra ; ka ny atao ihany no mankarary am-bavafo . [Houlder 1895]
Mitono manao mantamanta , mahandro manao lozodozotra : ny atao ihany no mankarary . [Rinara 1974 #2480]
Mitono , manao mantamanta ; mahandro , manao lozodozotra : ny atao ihany no mankarary am-bava-fo . [Cousins 1871]
Proverb 4589 Mpanakalo rano tratr’ orana : enjehin’ ny varotra ataony . [Cousins 1871 #1962]
Mpanakalo rano tratr' orana ka enjehin' ny varotra ataony . [Rinara 1974 #2571, Veyrières 1913]
Mpanakalo rano tratr' orana, ka enjehin' ny zavatra ataony . [Houlder 1895 #1716]
Mpivaro-drano tratr' orana ka enjehin' ny varotra ataony . [Rajemisa 1985]
Mpivaro-drano tratr' orana , ka ny varotra atao ihany no manenjika . [Veyrières 1913]
Proverb 4603 Mpandainga voafitaka : ny atao no miverina . [Rinara 1974 #2584, Cousins 1871 #1963]
Proverb 4689 Na dia mamy aza ny trondro , ny lela tsy azo atao hanin-jono . [Veyrières 1913 #6237]
Proverb 4699 Na hevitra inona na hevitra inona no atao , ho avy ny andro farany . [Veyrières 1913 #2888]
Proverb 4704 Nahoana fony niasa no tsy nanao ny tokony hatao fa nony kolokolo vao hanisy zezika ? [Rinara 1974 #2659]
Proverb 4712 Nahoana no atao maso voatoto-tany ? [Rinara 1974 #2666]
Proverb 4713 Nahoana no atao terak' ombin' Ambohimahagaga , ka ny tsy mianaka no ampinonoina ? [Houlder 1895 #1507, Rinara 1974 #2670]
Nahoana no atao terak’ ombin’ Ambohimahagaga : ny tsy mianaka no ampinonoina ? [Cousins 1871 #2030]
Proverb 4722 Nahoana no dia ratsy vintana ohatra ny saka : bevohoka vao atao mamosavy ? [Rinara 1974]
Nahoana no dia ratsy vintana takaky ny saka ? bevohoka vao atao mamosavy . [Veyrières 1913 #90]
Proverb 4734 Nahoana no ho maty volon' ny ratsy , ka ny soa no ampanirina ? [Houlder 1895]
Nahoana no maty volon’ ny ratsy , ka ny soa no atao saikiny ? [Veyrières 1913 #3045, Rinara 1974 #180, Cousins 1871 #2052]
Proverb 4804 Natao ala hikirizana , vato hifaharana . [Cousins 1871 #2084, Nicol 1935 #348]
Proverb 4805 Natao ala hikirizana , vato hifaharana , kanjo mampiseho andrana . [Veyrières 1913]
Proverb 4806 Natao anadahy hiankinana , kanjo misikidy ho vady . [Houlder 1895 #1759, Cousins 1871 #2085]
Natao ho anadahy hiankinana , kanjo misikidy ho vady . [Veyrières 1913 #1157, Rinara 1974 #2756]
Proverb 4808 Natao ho menaka hahamandina ny loha , kanjo nody loza mahasola vantony . [Cousins 1871 #2089, Veyrières 1913]
Proverb 4809 Natao ho ranonorana ho tohan’ aina , ka nivadika ho havandra hanorotoro . [Nicol 1935 #493]
Proverb 4810 Natao ho salaka hanohana ny aina , kanjo nitondra haofotsy hanaikifra ny valahana. [Rinara 1974 #2759]
Proverb 4811 Natao ho sanga ka nanakona, natao ho tandroka ka nanoto . [Rinara 1974 #2770]
Natao sanga hianao, ka nanakona ; natao tandroka, ka nanoto . [Nicol 1935 #391, Veyrières 1913]
Natao sanga ka nanakona; natao tandroka ka nanoto . [Houlder 1895 #576]
Proverb 4812 Natao ho vady hialana aina , kanjo tsy azo hianteherana akory. [Veyrières 1913 #1387]
Proverb 4813 Natao ho zavona hahamasaka ny vary , kanjo nanjary fanala hamono ny mangahazo . [Rinara 1974 #2761]
Natao ho zavona hahamasaka ny vary , kanjo tonga fanala hamono ny mangahazo. [Cousins 1871 #2092]
Proverb 4815 Natao ihany ny mandevina loha-angidina , fa tsy tonga vakan- karanana . [Houlder 1895 #638]
Natao ihany ny mandevina lohan' angidina , fa tsy tonga vakan- karanana . [Veyrières 1913 #92, Cousins 1871]
Natao ihany ny nandevina lohan' angidina , fa tsy tonga vakan- karanana . [Rinara 1974 #2763]
Proverb 4816 Natao ihany ny sikidy an-tanana , fa raha noana natakalo mangahazo . [Veyrières 1913 #132, Cousins 1871, Rinara 1974]
Proverb 4817 Nataoko ity hianao vary rojo fanefan-taona , kanjo hay vary rojo fanefan-trosa . [Rinara 1974 #2765]
Nataoko ity hianao vary rojo fanefan-taona , kanjo vary rojo, fanefan-trosa . [Veyrières 1913 #3129]
Nataoko ity hianao vary rojo fanefen-taona , kanjo vary rojo fanefen-trosa . [Houlder 1895]
Proverb 4818 Nataonao dia ho faty moa aho, no dia narianao tamin’ aretina ? [Cousins 1871 #2095]
Proverb 4819 Nataonao dia ho very angaha aho no dia narianao tamin-kabary ? [Houlder 1895 #1089]
Proverb 4820 Nataonao tsy hijoro angaha aho no nanalavitra ity hianao? [Rinara 1974 #2768]
Proverb 4827 Na tsy hitahy aza ny maty , ranomaso va tsy hirotsaka ? ary na tsy hino aza ny velona , kabary va tsy hatao ? [Houlder 1895 #2007, Veyrières 1913 #4779]
Na tsy hitahy aza ny maty , ranomaso ve tsy harotsaka ! [Rinara 1974]
Proverb 4887 Ny alakamisy an' Andriamanelo , ary ny zoma an' Andriamananitany ; ataoko fanjakana arindra . [Veyrières 1913 #297]
Proverb 4952 Ny andro iray no ahitana ny atao ela. [Veyrières 1913 #5567]
Proverb 4981 Ny atao toy ny salaka: soa atao , manodidina; ratsy atao , manodidina. [Veyrières 1913 #2955, Cousins 1871 #2183, Houlder 1895]
Proverb 5005 Ny didim-panjakana nataon' Andrianampoinimerina handrian' ny fanjakana. [Veyrières 1913 #229]
Proverb 5013 Ny ditra mahafaty , ary ny ratsy atao mahakizo fara . [Veyrières 1913 #3046]
Proverb 5019 Ny dom-pamaky no mody navela, fa ny vely loha no kanto . [Rinara 1974 #2934]
Proverb 5067 Ny fanompoana aza atao andran-drano : ka raha marivo hotsobohina ; ary raha lalin-kihemorana . [Houlder 1895]
Ny fanompoana aza atao andran-drano : marivo irobohana , raha lalin-kihemorana . [Rinara 1974 #2965]
Ny fanompoana aza atao andran-drano: raha marivo hotsobohina , ary lalin-kihemorana . [Cousins 1871 #2217]
Ny fanompoana aza atao andran-drano : raha marivo hotsoboina , raha lalina hihemorana . [Veyrières 1913 #382]
Proverb 5073 Ny faritan' ny maso sarotra atao an-trotroana . [Rinara 1974 #2971]
Proverb 5078 Ny fefiloha no ataontsika , fahavaloko ny rano . [Veyrières 1913 #389]
Proverb 5081 Ny fifonana no mendriky ny diso , fa mandia tany ka lavo , miloloha lanitra ka lena . [Rinara 1974 #2980]
Proverb 5108 Ny fitia ta-hanam-be : andevolahy iray, ka atao Ilaimaro . [Cousins 1871]
Ny fitia te-hanam-be : mpanompo iray, ka atao Ilaimaro . [Rinara 1974 #3001]
Proverb 5140 Ny hambohambo sarotra atao , ka tanio, fa zaza maty , fa toe-tarehy hitan’ olona ihany. [Veyrières 1913 #1529, Cousins 1871]
Ny hambohambo sarotra atao , ka tanio fa zaza maty , fa toe-tarehy niaraha-nahita . [Rinara 1974 #3024]
Proverb 5151 Ny harena no tian-kananana , ka ny aina no atao tsy ho zavatra. [Rinara 1974 #3033]
Proverb 5170 Ny hazo tapahina manam-pototra ; ny hazo vakina misy ilany; ny teny atao misy farany . [Houlder 1895 #563]
Proverb 5211 Ny kary no manao izay ataony , ka ny saka no tapa-drambo . [Cousins 1871 #2277, Nicol 1935 #117]
Proverb 5231 Ny kolokolo aza nokadiana , ka ny tena vary indray no atao baranahiny . [Rinara 1974 #3053]
Proverb 5249 Ny lalana fandrika , ny trano vovo , fa ny soa atao levenam-bola . [Rinara 1974]
Ny lalana fandriky ny trano , vovo. [Cousins 1871 #2296]
Proverb 5305 Ny manao soa tsy mahafaty antoka , fa ny manao ratsy enjehin' ny nataony . [Veyrières 1913]
Ny manao soa tsy mba mahafaty antoka , fa ny manao ratsy onjohin' ny nataony . [Houlder 1895 #1715]
Proverb 5398 Ny njola no atao mifanaraka , ny mipotsa-maso no lazaina ho bary , dia ny fitiavana azy no betsaka . [Rinara 1974]
Proverb 5429 Ny ombilahy fanoto no ampidirina , mba hanamafy ny akondro atao fototra . [Rinara 1974 #3189]
Proverb 5470 Ny ratsy atao , loza mihantona ; ny soa atao , levenam-bola . [Cousins 1871 #2404, Nicol 1935 #439]
Proverb 5508 Ny soa atao amin’ilay iny retaka, dia menaka ahoso-pory , fa tsy mba mivaly . [Veyrières 1913]
Proverb 5509 Ny soa atao amin' olona dia toy ny soratra am-pe : raha mando dia manjavona . [Veyrières 1913]
Proverb 5510 Ny soa atao no orim-bato , aty ny soa azo no vatsy zairina . [Veyrières 1913 #2970]
Proverb 5511 Ny soa atao tsangambato tsy azo hadinoina . [Veyrières 1913 #2971]
Proverb 5513 Ny soa raha atao amin’ ny tsy mahalala dia very . [Veyrières 1913]
Proverb 5514 Ny soa rehetra atao tsy mba very foana . [Veyrières 1913 #2973]
Proverb 5554 Ny teny aza atao lava loatra fa ny mamerina azy no tsy toha . [Rinara 1974 #211]
Proverb 5569 Ny teny no tsy atao lava , ny mamerina azy no manahirana. [Veyrières 1913 #4792, Cousins 1871 #2449]
Proverb 5588 Ny tody misy, ny atao koa miverin-drahateo . [Veyrières 1913 #46]
Proverb 5589 Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina . [Nicol 1935 #479]
Proverb 5596 Ny toky fitaka , ny atao no hita. [Rajemisa 1985]
Proverb 5600 Ny toko no tsy atao maranitra , ny vilany no atahorana ho vaky . [Rinara 1974 #3307, Cousins 1871 #2508]
Proverb 5603 Ny tompom-pasana indray no atao an-iritra. [Veyrières 1913 #2231, Rinara 1974 #3310, Cousins 1871 #2510]
Tsy mety raha ny tompom-pasana indray no atao aniritra , na ny tompony no atao mangataka ny atiny. [Rinara 1974 #4665]
Tsy mety raha ny tompom-pasana indray no hatao aniritra . [Veyrières 1913 #3879, Cousins 1871 #3479]
Proverb 5627 Ny trosa tahaka ny lay, izay zatra mandrairay azy no ataony fotsy maso . [Rinara 1974 #3333]
Proverb 5703 Ny vitsika no kely an-dilana, ny fahana ataony an-dreniny no mafy . [Veyrières 1913 #390, Cousins 1871 #2480]
Proverb 5789 Olobe an-tana , tsy atao hala . [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb 5801 Olon-kariana ka mody atao hoe : mitoera atsy ivohon' ny vato . [Rinara 1974 #3398]
Proverb 5817 Ombalahy mifaoka ambotry , ka mavon' ny ataony . [Veyrières 1913 #6320]
Ombilahy mifaoka am-botry ka mavon' ny nataony . [Houlder 1895 #1707]
Ombilahy mifaoka am-botry : mavon’ ny ataony . [Cousins 1871]
Ombilahy nisoitra votry ka mavon' ny nataony . [Rinara 1974 #3417]
Proverb 5823 Ombalahy tsy mitrena , ataoko fa adidin' ny fahitra . [Veyrières 1913 #674]
Ombilahy tsy mitrena : adidin' ny fahitra . [Rinara 1974 #3421]
Proverb 5840 Ombilahy tsy mitrena, ataoko adidin’ ny fahitra . [Cousins 1871]
Proverb 5882 Ondry mivoaka maraina : bokan’ ny ataony . [Cousins 1871, Veyrières 1913]
Ondry mivoaka maraina ka bokan' ny ataony . [Rinara 1974 #3463]
Proverb 5981 Rafotsibe nanihika an-tatatra : atao ambany lomotra no azo, antenantenany, tsy misy hihodinana , atao ambony tsy mahazo . [Rinara 1974 #228]
Rafotsibe nanihika an-tatatra ; atao ambany, lomotra no azo; antenantenany, tsy misy hihodinana ; atao ambony, tsy misy azo. [Veyrières 1913 #1915, Cousins 1871 #2617]
Proverb 6001 Raha akoholahy tsy maneno, ataoko adidin’ ny trano . [Cousins 1871 #2634, Nicol 1935 #121]
Proverb 6009 Raha ankasomparana no atao , boriako samy tsy hanana. [Veyrières 1913 #3214, Cousins 1871 #2638]
Raha an-kasomparana no atao , hoboriako samy tsy hanana. [Houlder 1895 #419]
Raha ankasomparana no hatao , hoboriako samy tsy hanana. [Rinara 1974 #229]
Proverb 6011 Raha an-tsingoloka no hatao dia ny vorombazaha no hahazo be. [Rinara 1974 #231]
Proverb 6016 Raha ditra no atao dia izaho manam-be noho hianao. [Rinara 1974 #3558]
Raha ditra no atao , izaho manam-be noho hianao. [Houlder 1895 #411, Veyrières 1913 #6380, Cousins 1871 #2643]
Proverb 6029 Raha hety ny atao , hazondrano tonga andevo . [Houlder 1895 #1557]
Proverb 6030 Raha hianao no miteny : hetsika Andriananahary , fa raha olona kosa no miteny : tangena ambony varavarana . [Rinara 1974 #3570]
Raha hianao no miteny : Hetsika Andriananahary ; fa raha olona : Tangena ambony varavarana . [Cousins 1871]
Raha ny tianao no hatao , hetsika Andriamanitra ; fa raha ho an' olona , tangena ambonin' ny varavarana . [Veyrières 1913 #856]
Raha ny tianao no hatao , hetsika Andriananahary ; fa raha ho an' olona , tangena ambonin' ny varavarana . [Houlder 1895 #78]
Proverb 6055 Raha lany ny mamy ao anatin' ny vilany , dia ahohoky ny olona izy ka ny vavany kosa indray no ataony ambany. [Veyrières 1913]
Proverb 6079 Raha mamazivazy ahy hianao, dia ataoko toy ny fametraka siny, ka ny vavany no ataoko ambany. [Cousins 1871 #2683]
Proverb 6085 Raha manan-karen-drahavavy tsy tia: raha miditra, ataony hangataka ; raha mivoaka , ataony hangalatra . [Cousins 1871 #2686]
Proverb 6113 Raha mpanan-karena tsy mahavoky andevo , dia sahala amy ny malahelo ihany; ary raha malahelo be hanin-kotrana , dia sarotra atao malahelo. [Cousins 1871]
Proverb 6120 Raha ny azy ataony hoe : " voahangy raraka " ; ary raha ny an' olona , dia hoe : " voantay " . [Veyrières 1913 #5406]
Proverb 6281 Rano tsy androana , tsy mahafatseroka , lamba tsy atafy , tsy mahafana , ny vary tsy hanina , tsy mahavoky, ny raharaha tsy atao , tsy lavorary . [Rinara 1974 #3714]
Rano tsy androana tsy mahafa-tseroka , ny lamba tsy atafy tsy mahafana , ny vary tsy hanina tsy mahavoky, ny raharaha tsy atao tsy mety lavorary . [Houlder 1895 #725, Veyrières 1913 #3969]
Proverb 6290 Rarako tsy laka, hoy ilay takatra. [Houlder 1895]
Proverb 6411 Saingy atao hoe : antsiben' Andriamanitra , ka dia hanamerika andro . [Veyrières 1913 #6034, Rinara 1974 #3787, Cousins 1871]
Proverb 6412 Saingy atao hoe: Rainiarosy , ka dia hirosirosy . [Veyrières 1913 #6035, Cousins 1871]
Saingy atao hoe : Rainiarosy , ka hirosirosy . [Rinara 1974 #3788]
Proverb 6443 Sakalava very omby ka ny sisa no atao tsara (mafy ) hidy. [Rinara 1974 #3800]
Proverb 6499 Sandry be tsy ataon’ olona . [Samson 1965 #S10]
Proverb 6514 Sarak’ efa tsy atao vato. [Samson 1965 #S42]
Proverb 6622 Sodokan' ny atao mandrosoa , ka miantsampy eny an-toeran' entana . [Rinara 1974 #3913, Cousins 1871]
Proverb 6665 Somalahy retareta ka sarotra atao ratsy . [Veyrières 1913 #1709, Rinara 1974 #3941, Cousins 1871 #2931]
Proverb 6670 Somonga , somonga , fe ty tsongo voto , maharare . [Poirot & Santio: Vezo]
Tsy atao somonga ty tsongo latake . [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb 6688 Soroka efa tsy atao vato. [Houlder 1895]
Proverb 6723 Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana : tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona , fa ny mipetraka amy ny tany hohazan-tanana , mba hamenoana ny harona. [Cousins 1871]
Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana : tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona , fa ny mipetraka amin' ny tany koa hohazan-tanana . [Rinara 1974]
Proverb 6786 Takotry ny ratsy ny soa nataony . [Veyrières 1913 #3070]
Proverb 6876 Tanora nolatsain-kavana ka ny angady no atao lava lela . [Rinara 1974 #4061]
Proverb 6962 Tefy angadin-dRainimanankiarana : ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta ; ary nony mivarotra , dia ny masak’ arina ihany no alaina . [Cousins 1871]
Proverb 6967 Tefi- vilian- -dRainiraony : ny an' olona novonjeny , ka ny an' ny tena no atao tofefi-katoka . [Houlder 1895]
Tefy vilian- -dRainiraony : ny an’ olona vonjena , ka ny any ny tena atao tofefi-katoka . [Cousins 1871 #3054]
Tefy vilian- -dRainiraony : ny an' olona vonjena , ka ny an' ny tena atao tofefi-katoka . [Veyrières 1913 #3876]
Tefi-vilian-dRaoniraony : ny an' olona no vonjena , fa ny an' ny tena atao tofefi-katoka . [Rinara 1974]
Proverb 7033 Tiako tahaky ny voatavo hianao : lena hianao haniko ; maina hianao ataoko zinga ; vaky hianao, ataoko toham-baliha hotendreko eroa amoron-dalana . [Veyrières 1913 #5142]
Proverb 7111 Toy ny angidina : atao mahia , be tratra; atao matavy , kely rambo. [Houlder 1895 #991, Cousins 1871 #3182]
Proverb 7357 Trano bongo misy ronono , ka sarotra atao malahelo. [Houlder 1895 #1363]
Trano bongo misy ronono : sarotra atao malahelo. [Cousins 1871 #3269]
Proverb 7442 Tsy azo atao ahoana amin' ahoana. [Veyrières 1913 #6389]
Proverb 7455 Tsy fidiny ny akan-koririka , fa ny atao no tsy misy. [Houlder 1895 #2310]
Proverb 7474 Tsy hita isay hatao; fa ny iray manao hoe: "Mivalana," ary ny iray manao hoe : "Valala". [Cousins 1871]
Tsy hita izay hatao , fa ny iray manao hoe : " mivalàna " ary ny iray manao hoe " valala " . [Veyrières 1913]
Tsy hita izay hatao , fa ny iray manao hoe : mivalàna , ny iray kosa manao hoe : valala . [Rinara 1974 #4495]
Proverb 7475 Tsy hita izay hatao , fa ny iray manao hoe : " mivalana ny lohasaha " ary ny iray : " mioriha " kosa. [Veyrières 1913 #5832]
Tsy hita izay hatao ! Ny iray manao hoe: "Mivalàna ny lohasaha" ; ary ny iray: "Mioriha " kosa. [Houlder 1895]
Proverb 7484 Tsy hofitahin' olon-tiana , tsy holaingain' olo-mahatoky ; fa ny ataon' izany no saro- -pantarina . [Veyrières 1913 #4962, Cousins 1871 #3355]
Tsy ho fitahin' olon-tiana , tsy ho laingan' olo-mahatoky , fa ny ataon' izany no saro- -pantarina . [Rinara 1974]
Proverb 7579 Tsy mba atao baranahiny , tsy mba atao karenjy . [Veyrières 1913 #1407]
Proverb 7585 Tsy mba malahelon’ izay tsipaka ataon’ Imanja aho, hoy ilay sarotin- -dronono . [Cousins 1871 #3386]
Tsy mba malahelon’ izay tsipaka ataon’ Imanja aho, hoy ilay tia ronono . [Cousins 1871 #3386]
Tsy mba malahelon' izay tsipak' Imanja aho, hoy ilay sarotin- -dronono . [Rinara 1974 #4543]
Proverb 7613 Tsy mba vilany hotovonana , tsy angady ka hotsiniana fa ny atao no mahatsara sy maharatsy . [Rinara 1974 #4577]
Proverb 7627 Tsy mety raha atao hoatry ny latsin-trano : an-trano , tsy mahita hivoahana ; alatrano, tsy mahita hidirana . [Veyrières 1913 #4094]
Tsy mety raha atao ohatra ny latsin-trano : an-trano , tsy mahita hivoahana ; ala-trano, tsy mahita hidirana . [Cousins 1871]
Tsy mety raha atao toy ny tery latsin-trano : alatrano tsy mahita hidirana ao an-trano tsy mahita hivoahana . [Rinara 1974 #4583]
Proverb 7628 Tsy mety raha atao ondrilahy tsindrim-barotra , ka lehibe fa tsy mba lohany . [Rinara 1974 #4584]
Tsy mety raha atao ondrilahy tsindrim-barotra : lehibe tsy mba lohany . [Cousins 1871 #3404]
Proverb 7688 Tsy mety raha ny petaka orona indray no hiavona amy ny lesoka. [Cousins 1871 #3478]
Tsy mety raha ny petaka orona indray no hiavona amin' ny lesoka . [Veyrières 1913 #1792]
Tsy mety raha ny petak' orona indray no haneso ny lesoka . [Rinara 1974 #4662]
Tsy mety raha tsy lesoka, tsy petaka orona , ka atao ratsy fotsiny izao. [Veyrières 1913 #1793, Cousins 1871 #3476]
Proverb 7702 Tsy mety raha siaka no atao , ka bizizio no avaly . [Cousins 1871 #3488]
Tsy mety raha sioka no natao, ka bizizio no avaly . [Rinara 1974 #4677]
Proverb 7741 Tsy misy hofitahin-tsy ho azo, fa ny hiverenan' ny atao no tsy toha . [Rinara 1974 #4715]
Proverb 7750 Tsy misy mahalà izay tiany hatao . [Ravelojaona 1937]
Proverb 7758 Tsy misy mangidy hoatry ny sakay , hono , fa raha atao teny ierana dia mafanafana . [Veyrières 1913]
Tsy misy mangidy hoatry ny sakay , hono , fa raha atao teny ierana dia mamy . [Veyrières 1913]
Tsy misy mangidy toy ny sakay; fa raha teny ierana , mafanafana . [Cousins 1871 #3533]
Tsy misy mangidy toy ny sakay fa rehefa teny ierana mamy . [Rajemisa 1985]
Proverb 7766 Tsy misy mora atao , toy ny malemy , nefa aleon' ny kamo matory . [Rinara 1974]
Proverb 7819 Tsy ny dia manendrika no atao , fa izay hazakazaka an-tsena foana no aseho . [Cousins 1871 #3559]
Tsy ny dia manendrika no atao , fa izay hazakazaka an-tsena no hatranga . [Rinara 1974 #310]
Proverb 7828 Tsy ny hosoran-tsakay no ho mangidy ; tsy ny hosoran-tantely no ho mamy ; fa ny atao no mahasoa sy maharatsy . [Veyrières 1913 #4844]
Tsy ny hosoran-tsakay no mangidy hoditra , ary tsy ny hosoran-tantely no mamy hoditra , fa ny atao no mahasoa sy maharatsy . [Cousins 1871 #3565, Houlder 1895]
Tsy ny hosoran-tsakay no mangidy , tsy ny hosoran-tantely no mamy hoditra , fa ny atao no mahamamy sy mampangidy hoditra . [Rinara 1974 #4771]
Proverb 7878 Tsy satry ny mialin-koririka , fa ny vary hatao no tsy misy. [Veyrières 1913 #4637]
Tsy satry ny mialin-koririka , fa ny vary hatokona no tsy misy. [Rinara 1974 #309]
Tsy satry no mialin-koririka , fa ny vary hatao no tsy misy. [Cousins 1871 #3575]
Proverb 7882 Tsy soa tsy ratsy miendrik' androngo : atao tsara milongolingy vava , atao ratsy , be soratsoratra . [Rinara 1974 #4795]
Proverb 7977 Valala any an--danitra ka asiako sira , mbola tsy azo ka hoe : hatao tango lena . [Rinara 1974 #4833]
Valala mbola an--danitra ka asian-tsira . [Rajemisa 1985]
Proverb 8122 Vavy antitr’ Imamo : atao aloha, tsy mahatari-dalana ; atao aoriana, tsy mahafehy trano . [Veyrières 1913 #1940, Cousins 1871 #3650, Rinara 1974]
Proverb 8244 Voalavo mandositra andro : mahin' ny fanahy ratsy natao alina . [Rinara 1974 #4971]
Proverb 8245 Voalavo mihazakazaka alina : tsy ny lalana no mahamaika , fa ny fanahy ratsy atao andro lava no mahamaody . [Veyrières 1913 #4333, Cousins 1871 #3692]
Proverb 8298 Voly vita kiady ka sarotra atao hitsin-dalana . [Rinara 1974]
Proverb 8321 Voninahitra an-tsobiky tsy atao am-patambary . [Rajemisa 1985]
Voninahitra omena ny sobika , fa ny fatambary ihany no handraofana . [Veyrières 1913 #2269]
Voninahitra omena ny sobika , fa ny fatambary no tompon' ny fatra . [Veyrières 1913 #2269]
Voninahitra omena ny sobiky , fa ny fatambary no azo handraofana ihany. [Cousins 1871]
Voninahitra omena ny sobiky fa ny fatambary no tompon' ny fatra . [Rinara 1974 #327, Cousins 1871]
Proverb 8409 Zatovo barabara saina , ka ataon' ny sasany andefimandry . [Veyrières 1913 #1597, Cousins 1871 #3767]